သင်ဒီမှာပါ: Home / monsanto များအတွက်မော်ကွန်း
Monsanto အကြောင်းဗီဒီယိုကို - Freaky! ထှနျး! မွငျရ!
15 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon3မှတ်ချက်
ယူနိုက်တက်စတိတ် - GMO သို့မဟုတ်မ GMO? အစဉ်အဆက်နေလျှင်သင်ဒီမှာသင့်ရဲ့အဖြေထက်, ဤမေးခွန်းကိုမေးတယ်။ ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ပါ သင်ကနောင်တမရလိမ့်မည်!
Filed under: ဗီဒီယိုများ အတူ Tagged: monsanto